Juventus, Real Madrid, Manchester City 'dhamaantood Waxay Doonayaan Kalvin Phillips'
Home Wararka Ciyaaraha Juventus, Real Madrid, Manchester City ‘dhamaantood waxay doonayaan Kalvin Phillips’
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Leeds United Kalvin Phillips ayaa lagu soo waramayaa inay raadinayaan kooxaha Juventus , Real Madrid iyo Manchester City , iyadoo seddexda kooxoodba ay sheegeen inay xiiseynayaan saxiixiisa.
25 jirkaan ayaa qaab ciyaareed fiican ku soo qaatay Leeds intii lagu guda jiray ololihii 2020-21, isagoo u saftay 30 kulan tartamada oo dhan, isagoo ka qeyb qaatay hal gool iyo seddex caawin.
Phillips ayaa sidoo kale soo bandhigay qaab ciyaareed cajiib ah xulka England kulankii furitaanka Euro 2020 ee xulkiisa uu wajahay Croatia isbuucii hore, isagoo caawiye ka ahaa goolka Raheem Sterling.
Sida laga soo xigtay TuttoJuve , Juventus, Real Madrid iyo Man City ayaa dhamaantood isha ku haya heshiis xagaaga ah oo ay ku doonayaan xiddigan khadka dhexe.
Phillips wuxuu qandaraas kula jiraa kooxdiisa illaa Juun 2024, in kastoo, uu dhigaayo kooxda Marcelo Bielsa meel adag marka ay timaado wax wada xaajood ah oo ka dhici kara suuqa hadda jira.
xidiga wuxuu soo maray nidaamka dhalinyarada ee Elland Road wuxuuna kooxda koowaad u sameeyay 211 ciyaarood.
Previous articleKieran Tierney oo qarka u saaran inuu saxiixo heshiis cusub oo shan sano ah oo Arsenal ah
Next articleHordhac: Kulanka Spain Vs Poland ee Guruubka E Euro 2020, Shaxda iyo Xidigaha Dhaawaca ah